China Dongshen matihanina spaonjy spaonjy mandatsaka endrika tsy misy tara-teha PU fototra fanatsarana tarehy spaonjy blender mpamokatra sy mpamatsy | Dongmei
Dongshen matihanina spaonjy spaonjy milatsaka endrika latina-tsy misy fotony PU fototra fanatsarana tarehy spaonjy blender blender
Makeup matihanina Dongshen matihanina sy blender spaonjy, endrika manafosafo endri-dronono, blender sponjy blender vita amin'ny akora PU, azo ampiasaina amin'ny maina sy lena, tsy mihinana vovoka, mahatsiaro ho marefo sy marevaka amin'ny hoditra ny makiazy, ary manao tsy manelingelina ny hoditra.
● DONGSHEN MAKEUP SPONGES: Makeup Sponge Blender vita amin'ny akora spaonjy madio mba hampihenana ny tsy fahampian-tsakafo, fahatsapana malefaka, spaonjy tsara bouncy, mora avahana. Sponjy makiazy dia safidy tsara ho an'ny matihanina sy ny vao manomboka. Mora ampiasaina, madio. Raiso ny spaonjy hanatsara ny makiazy isan'andro!
● MAFY MAIMAIMPOANA: TSY mila manam-pahaizana ianao - Tadiavo fa mora ny mampiasa spaonjy hatsaran-tarehy voajanahary. WET, SQUEEZE ary BOUNCE tsotra fotsiny. Arotsaho amin'ny rano ny spaonjy hatsaran-tarehinao, esory ny rano be loatra, ary atsofohy amin'ny tarehy tsy misy kilema ny vokatra makiazy anao.
● Volavola tsy manam-paharoa: Mampiasà spaonjy boribory blender boribory fototra na fototra ho an'ny fototra na endrika mena, ny lafiny maranitra hidirana amin'ny faritra sarotra aleha (manodidina ny maso, vava ary orona) ary ny lafiny fisaka ho an'ny fihodinana manodidina ny orona sy ny maso , ny fampiasana samihafa dia manampy amin'ny famaranana voajanahary voajanahary.
● WET NA MAIMA tanjona: Ny blender Beauty dia mety mivonto rehefa lena, mety amin'ny karazana kosmetika, fototra, crème BB, vovoka, fanafenana, ranona sns. Ny fampiasana maina sy lena dia misoroka ny fandaniam-tarehy fanaovana kosmetika. 8 loko isan-karazany ny firindrana spaonjy makiazy napetraka, Ny tendrony sy ny faritra mivalona amin'ny spaonjy makiazy dia azo ampiharina mora foana amin'ny fampiharana kosmetika isan-karazany, tsy misy kilema ho an'ny ranon-javatra, fanosotra ary vovoka.
● SERVICE 100% SATISFIED: Ny makeup makeup spaonjy no safidinao tsara indrindra, raha mahita olana na sosokevitra momba anay ianao lasitra spaonjy blender, azafady azafady mifandraisa aminay, hanome fanampiana sy serivisy matihanina izahay mandritra ny 24 ora.
Fomba roa hampiasana spaonjy:
1. Mampiasà blender hatsaran-tarehy handrobohana kosmetika vovoka,
toy ny fototra, vovoka malalaka, blusher, fisongadinana, aloky ny maso, alokaloka sns.
2. Arosoy tsara eo ambonin'ny sehatry ny spaonjy.
3. Mandoto sy misosa mivantana ny tavanao mba hamoronana endrika makiazy voajanahary.
1. Atsofohy amin'ny rano mafana rehefa ampiasainao, aorian'ny fiparitahan'ny spaonjy makiazy blender, potsiro rano fanampiny.
2. Mangataha kosmetika misy ronono, marikivy na ranon-javatra, toy ny fototrano misy ranoka, crème BB, crème CC, sunblock, mpanafina endrika sns,
ranon-javatra sy vovoka tsara kokoa raha hampiasa sponjy misaraka.
3. Nifindra moramora mba hampihenana ny fako tsy ilaina.
1. Atsofohy ao anaty rano savony malefaka ny sponjy makiazy ary tsindrio hasiana rano ampy tsara, avereno in-2-3 ity, ary kosohy moramora. (Aza manosotra mafy)
2. Esory ny savony tafahoatra, ary kobanina ao anaty rano mandra-pikatony intsony.
3.Ary azonao atao ny mamoaka ilay ranoka tafahoatra, apetaho amin'ny mpitaingina spaonjy ary avelao ho maina ny rivotra.
Ps Aleo diovina isaky ny ampiasaina hialana amin'ny bakteria.
Soso-kevitra isaky ny 1-2 volana hisolo azy.
Teo aloha: Marika manokana namboarina ambongadiny 12 pcs raozy makiazy mena napetraka vovoka mena tarehy contour manasongadina eyeshadow fampifangaroana kosmetika borosy fitaovana
Manaraka: Dongshen ambongadiny makiazy spaonjy latex-maimaim-poana oblique nanapaka endrika miendrika volo malemy volo makiazy hatsaran-tarehy spaonjy blender
Blender amin'ny hatsaran-tarehy
lasitra spaonjy blender
Fitaovana borosy makiazy, Barber Shave, Manaova borosy, Faritra fiharatra, borosy makiazy napetraka, Mametraha makiazy borosy,